Ko Khit, Author at Khitamyin - Page 178 of 178
မှော်ဘီမြို့ က အောင်ဇမ္ဗူတောရကျောင်းတိုက် မှာ အဓိဌာန်ပြု တရားစခန်း ဝင်နေရင်း နှစ်ဦးကုသိုလ်လေးပြုလုပ်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်…
January 9, 2021 Ko Khit 0
ဖြူဖြူသေးသေးလေးနဲ့ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ ဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့လေးဖြစ်ပေမယ့် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ် ကာရိုက်တာအတိုင်း စိတ်ရောလူပါ ပြောင်းလဲပြီး သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်မှုံရွှေရည်က အခုဆိုရင် အသက်သုံးဆယ်ကျော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေပြီဖြစ်ပြီး အလုပ်တွေကိုလည်း အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေသလို ဘာသာရေး နဲ့ ကုသိုလ်ရေးမှာလည်း လစ်ဟင်းသွားမှုမရှိအောင် အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသူလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း […]
အရိုးကင်ဆာ ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ မှိုကွန်ချာ…
January 8, 2021 Ko Khit 0
အရိုးကင်ဆာ ပျောက်တဲ့ မှိုကွန်ချာ ကျနော် မှတ်ထားတာလေးကို မျှဝေတာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က FB မသုံးစွဲကြပါဘူး နတ္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ဖတ်ပါတယ် အဲ့ထဲမှာက အခုလို ဆေးဖက်ဝင်သော အကြောင်းရာတွေကို အကိုးကားနဲ ပါလေ့ရှိပါတယ် ။ လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးဝင်ပြီး […]
အောင်လအန်ဆန်းက ဦးဆောင်၍ ‘အလဲထိုး’ကမ်ပိန်း လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်မည်…
အောင်လအန်ဆန်းက ဦးဆောင်၍ ‘အလဲထိုး’ကမ်ပိန်း လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်မည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျား၊ မ အခြေပြု အကြမ်း ဖက်မှုများအပေါ် အဆုံးသတ်ရန်အတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ‘အလဲထိုး’ကမ်ပိန်း လှုပ် ရှားမှုကို အောင်လအန်ဆန်းက ဦးဆောင်ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဥရောသမဂ္ဂမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို အမြစ်ဖြတ် တိုက်ဖျက်ရန်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် တညီတညွတ်တည်း […]
ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီး နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေက အလွန်ကြောက်စရာကောင်းကြောင်း ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက သတိပေးပြောကြား…
ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီးပါက ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသော်လည်း အဆုတ်နှင့် နှလုံးမကောင်းနိုင်တော့.. ကိုဗစ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီးပါက ပြန်လည်ကုသပျောက်ကင်းသော်လည်း အဆုတ်နှင့် နှလုံးမကောင်းနိုင်တော့တာကြောင့် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရောဂါဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ကျန်မာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက “ဒီရောဂါကို လျှော့တွက်လို့မရတာက သူ့ကိုဒါဖြစ်ရင် ဒါပေးလို့မရဘူး။ တိုက်ဖွိုက်ဖြစ်ရင် ဒါဖြစ်ရင် ဒါပေးလို့ရတယ်။ နှလုံးရောဂါ ဒါဖြစ်ရင် […]
မျက်နှာပဲဖြူပြီး လည်ပင်းကြီးမည်းနေလို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေလား?…
January 7, 2021 Ko Khit 0
မျက်နှာကိုပဲ ဂရုစိုက်ရင်း ငွေတွေ အများအပြား အသုံးပြုကြပေမယ့် လည်ပင်းကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျှော့နေတတ်ကြပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းရင်တောင် လည်ပင်းကိုလိမ်းပေးဖို့ မေ့တတ်ကြသူတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ မျက်နှာပဲဖြူပြီး လည်ပင်းကြီးမည်းနေရင်လည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ လည်တိုင်ဖြူဖြူလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရအောင်ပါ။ ပြုလုပ်နည်း ၁ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း အုန်းဆီ […]
ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ကြီးကိုလိပ်ခန္ဓာပါစပ်ကြက်တူရွေးမိချောင်းအမှီးအင်္ဂါသုံးမျိုးပါလိပ်တစ်ကောင်လာရောက်ဖူးမျှော်. ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုံးကလူကြီးတွေပြောလို့ကြာပဲကြားဖူးခဲ့တာမိုးတွင်းဘတ်ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားတရိစ္ဆာန်တွေဘုရားတတ်ဖူးတယ်လို့ပြောဖူးခဲ့တာ့အခုတော့လတ်တွေ့ပါ။ (၁:၃၀)အချိန်တွင်ချောက်အတွင်းမှတတ်လာပြီးရင်ပြင်တော်မှတစ်ဆင့်ဘုရားဘတ်သို့ဦးတည်ကာအင်္ဂါသုံးမျိုးပါလိပ်တစ်ကောင်ဘုရားဖူးရန်တတ်လာသည်။ ၎င်းလိပ်အားတွေရှိပြီးရင်ပြင်တော်ဂေါပကတာဝန်ခံဦးအေးမြင့်သိန်းမှရင်ပြင်တော်ဂေါပကရုံးအတွင်းခေတ္တထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ထားသည်ဟုသိရသည်။ Credit Zawgyi ; ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကိုလိပ္ခႏၶာပါစပ္ၾကက္တူေ႐ြးမိေခ်ာင္းအမွီးအဂၤါသုံးမ်ိဳးပါလိပ္တစ္ေကာင္လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္. ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္တုံးကလူႀကီးေတြေျပာလို႔ၾကာပဲၾကားဖူးခဲ့တာမိုးတြင္းဘတ္က်ိဳက္ထီး႐ိုးဘုရားတရိစာၦန္ေတြဘုရားတတ္ဖူးတယ္လို႔ေျပာဖူးခဲ့တာ့အခုေတာ့လတ္ေတြ႕ပါ။ (၁:၃၀)အခ်ိန္တြင္ေခ်ာက္အတြင္းမွတတ္လာၿပီးရင္ျပင္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ဘုရားဘတ္သို႔ဦးတည္ကာအဂၤါသုံးမ်ိဳးပါလိပ္တစ္ေကာင္ဘုရားဖူးရန္တတ္လာသည္။ ၎လိပ္အားေတြရွိၿပီးရင္ျပင္ေတာ္ေဂါပကတာဝန္ခံဦးေအးျမင့္သိန္းမွရင္ျပင္ေတာ္ေဂါပက႐ုံးအတြင္းေခတၱထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ထားသည္ဟုသိရသည္။ Credit
လူအယောက် ၂၀ကျော်နဲ့ ၃နှစ်ကြာအချိန်ယူပြီး ထုထွင်းခဲ့ရတဲ့ သစ်သားခြင်္သေ့ကြီးကို ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ ပန်းပုဆရာ…
January 5, 2021 Ko Khit 0
ပန်းပုဆရာ Dengding Rui Yao ဟာ သစ်ပင်ပင်စည်တစ်ခုတည်းမှ ထုထွင်းထားတဲ့ မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ သစ်သားခြင်္သေ့ကြီး တစ်ကောင်ကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ Yao ဟာ ၎င်း ပန်းပုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ထောက် လူအယောက် ၂၀ နဲ့ သုံးနှစ်အကြာ ထုထွင်းပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးနောက် အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ […]